फेरि पोइला जाने चाहना - गसिप - साप्ताहिक
फेरि पोइला जाने चाहना
चर्चित लोकगायिका कोमल वलीले कुन-कुन क्षेत्रमा काम गरिन् भनेर खोज्नुभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा गरिनन् भन्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै बेला राष्ट्रिय खेलकुद र राष्ट्रिय लोकदोहोरी गायन प्रतियोगितामा अब्बल सावित हुँदै 'नेसनल फिगर' भएकी कोमलले पछि रेडियो नेपालमा समाचारवाचिकाको परिचय बनाइन् । गायिकाका रूपमा त उनको परिचय छँदै थियो, पछि चलचित्र नायिका पनि बनिन् । चलचित्र राजनीतिमा कोमलले महानायक राजेश हमालको को-स्टारका रूपमा अभिनय गरेकी थिइन् । उक्त चलचित्र असफल भएकाले कोमलको प्रतिभा भने खासै जम्न सकेन् । अहिले कोमल आफ्नो चर्चित तीज गीत पोइला जान पामलाई नै शीर्षक बनाउँदै एउटा चलचित्र निर्देशन गर्ने जमर्को गर्दैछिन् भन्ने हल्ला चलेको छ । नारीप्रधान विषय समेटिने चलचित्र पोइला जान पामको कथालेखन पनि वलिकै हुने बताइएको छ । आफूद्वारा अभिनीत दोस्रो चलचित्र दबदबा प्रदर्शनको तयारीमा रहेकै बेला कोमलले चलचित्र पोइला जान पाम निर्माण गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको हो ।
नायिका नीता ढुंगानाले आफ्नो प्रेम प्रसंग सार्वजनिक गरेकी छिन् । दिनेश डिसीको चलचित्र 'फूलैफूलको मौसम तिमीलाई' मार्फत डेब्यु गर्ने नायक आमेश भण्डारीसँग विगत तीन वर्षदेखि प्रेम-सम्बन्धमा रहेको कुरा नीताले फेसबुक स्ट्याटसमार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । डिसीको चलचित्रमा यी दुवै जना मुख्य भूमिकामा छन् । नीताले आफ्नो स्ट्याटसमा 'विथ माइ लाइफ' लेख्दै आमेशसँगको प्रेम सार्वजनिक गरेकी हुन् । नीताका अनुसार आमेशसँग उनको पहिलो भेट तीन वर्षअघि एउटा विद्यालयको कार्यक्रमका क्रममा भएको थियो । 'एउटा हेन्डसम युवकले आफूलाई निरन्तर हेरेपछि लाज लागेको थियो, नीताका अनुसार त्यसपछिका भेटघाटले प्रेमको रूप लिन समय लिएन । प्रेमी नै नायक भएको पछिल्लो चलचित्रमा काम गर्न सहज भएको नीताको अनुभव छ । भनिन्छ, नीता र आमेशले सल्लाह गरेरै यो सम्बन्धलाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।
निकिता पनि निर्देशक ?
निर्माता उद्धव पौडेलकी छोरी निकिता पौडेलले चलचित्र निर्देशकका रूपमा डेब्यु गर्ने पक्का भएको छ । सूत्रहरूका अनुसार गोपीकृष्ण मुभिजले निर्माण गर्न लागेका थुप्रै चलचित्रमध्ये एउटा चलचित्र निर्देशन गर्ने जिम्मा निकिताले पाएकी छिन् । चलचित्रको निर्देशनका लागि निकिताले स्क्रिप्ट तथा गीत-संगीत समेत तयार पारिसकेको बताइन्छ । निकिताको चलचित्रको संगीत निर्देशन अर्जुन पोखरेलले गरिरहेका छन् भने किरण माईकलले चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखेका छन् । गोपीकृष्णकै अर्को एउटा चलचित्रको निर्देशन भने निकिताकै दाई निरक पौडेलले गर्नेछन् । निकिता र निरकले निर्देशन गर्ने चलचित्रका शीर्षक भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
जेरीको रमाइलो अर्थ
नेपाली चलचित्रको निर्माणमा तीव्रता आउन थालेलगत्तै शीर्षकमा समेत विविधता देखिन थालेको छ । आज शुक्रबार प्रदर्शनमा आउने चलचित्र 'जेरी' को शीर्षक गुलियो खाद्य पदार्थको नामबाट सापटी लिइएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । खानेकुराको नामबाट चलचित्रको शीर्षक जुराउनु नौलो कुरा होइन, तर 'जेरी' शीर्षक राखिनु खानेकुरासँग मात्र सम्बन्धित नरहेको चलचित्रका निर्माता मनोज शेरचनले स्पष्ट पारेका छन् । शेरचन भन्दै थिए—
'पहिलो कारण त जेरीको स्वाद जस्तो मीठो कथा भएकाले यसको शीर्षक जेरी राखिएको हो । दोस्राे कारण चलचित्रमा अनमोल केसीको पात्रको नाम नै जेरी छ । उनको पात्रको थर जंगबहादुर राणालाई छोटकरीमा जेरी भनिएको हो ।' तेस्राे कारण भने पृथक् छ । चलचित्रमा अनमोल केसीले चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम 'टम एन्ड जेरी' का जेरीको जस्तै चुलबुले पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । चलचित्र निर्देशक हेमराज बिसीले यी तीनवटा कारणले चलचित्रको शीर्षक 'जेरी' जुरेको बताउँदै चलचित्रले 'जेरी' झैं स्वाद पस्कने दावी गरेका छन् ।
चलचित्रको छायांकन प्रारम्भ नहुन्जेल मुख्य कलाकार अनुबन्ध हुने, अनुबन्ध गरिएका कलाकार हटाएर पुनः नयाँ कलाकारलाई लिने चलन नयाँ होइन । केहीअघि विकास आचार्यले चलचित्र 'नाइँ नभन्नु ल-३' बाट जीवन लुइँटेलको स्थानमा आर्यन सिग्देललाई भित्र्याएका थिए । अहिले आएर निर्माता तथा हास्यअभिनेता दीपकराज गिरीले दर्शकहरूको अनुमान विपरीत प्रियंका कार्कीलाई आफ्नो नयाँ चलचित्र 'वडा नम्बर ६' का लागि अनुबन्ध गरेका छन् । पहिलो चलचित्र 'छ एकान छ' मा नीता ढुंगानाले ६ जना नायकको नायिका बन्ने अवसर पाएकी थिइन् । उक्त चलचित्रको व्यवसायिक सफलतापछि दीपकको नयाँ चलचित्रमा पनि नीता नै नायिका हुने अनुमान गरिएको थियो । अनुमानविपरित दीपकले नायिका प्रियंका कार्कीलाई नायिकाका रूपमा सार्वजनिक गरेर सबैलाई अचम्मित तुल्याए । भनिन्छ, चलचित्रमा प्रियंकालाई दीपककी जोडीका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
। श्रीमान्ले यौनसर्म्पर्क गर्दा कतै फेरि त्यस्तै हुने हो कि ?
मेरो चाहना चलचित्रमा नायिका हुने थिएन
भिडियो हेर्दा पनि यौनसम्पर्क गर्ने चाहना हुँदैन।